Su’aalo ka taagan xalaalnimada tallaalka COVID-19. - NorSom News
NorSom News DISCOVER THE ART OF PUBLISHING
Home Nyheter/Warcusub Su’aalo ka taagan xalaalnimada tallaalka COVID-19.
Su’aalo ka taagan xalaalnimada tallaalka COVID-19.
Foto: JOHN MANIACI / X80001
Ayada oo shirkadaha caalamka ay orod ugu jiraan inay soo saaraan tallaalka COVID-19, dalalkuna ku hardamayaan inay noqdaan kwua ugu horreeya ee hela, ayaa waxaa soo baxaya su’aalo la xiriira haddii tallaalka qaarkiis uu ku jiro walxo ka yimid doofaarka.
Dufan loo yaqaan gelatin, oo ka timid doofaarka, ayaa inta badan lagu daraa tallaalada, si loo xasiliyo, loona xaqiijiyo bad-qabka iyo wax ku oolnimadooda marka la keydinayo ama loo dhoofinayo.
Shirkadaha qaar ayaa sanado badan horumarnayey tallaal aan lagu darin maadadaas, waxaana ka mid ah kuwa ku yaalla Switzerland, Saudi Arabia iyo Malaysia.
Hase yeeshee qiimaha badan eek u kacaya iyo muddo jiritaanka gaaban ee tallaalada aan laheyn gelatin-ka doofaarka, ayaa ka dhigi karta in inta badan tallaallada lagu daro, sida uu sheegay Dr. Salman Waqar oo ah xoghayaha guud ee ururka Dhqaatriirta Muslimiinta ah ee UK.
Afhayeeno u hadlay shirkadaha Pfizer, Moderna iyo AstraZeneca ayaa sheegay in tallaallkooda COVID-19 uusan ku jirin wax doofaar ah. Warkan ayaa ah mid wanaagsan maadaama saddexdan shirkad ay yihiin kuwa ugu caansan ee illaa hadda soo saaray tallaalka COVID-19.
Islaamka ayaa sidoo kale ku kala duwan arrintan, waxaana culimada qara dooddooda ay tahay in tallaalka la adeegsan karo, sababtoo ah “waxyeelo ka weyn” ayaa dhici karta haddii aan la qaadan, sida uu sheegay Dr. Harunor Rashid oo wax ka dhiga Jaamacadda Sydney.
Dalka Indonesia oo ah kan ugu Muslimiinta badan caalamka, ayaa Golaha Culimada waxa uu 2018-kii soo saaray go’aan ay ku diideen isticmaalka tallaalada jadeecada iyo kuwa kale oo ay ku jirtay maadada gelatin-ka.
Indonesia, dowladdu waxay horey u sheegtay inay ku dari doonto hay’adda culimada muslimiinta nidaamka iibinta iyo shahaadooyinka ee COVID-19.
Dalalka Islaamka badankood ayaa la filayaa inay qaadaan tallaabo la mid ah tan Indonesia oo ay ka xaqiijinayaan in la hubiyo tallaalada COVID-19, kadibna ay bixiyaan shahaadooyin xaqiijinaya inay ka maran tahay gelatin-ka.
Previous articleSweden oo sababtan darteed u xireyso xadka ay Denmark la wadaagto.
Next articleBooliska Bergen oo nin toogasho ku dilay.
Keydka NorSom Velg måned januar 2022 (38) desember 2021 (47) november 2021 (62) oktober 2021 (71) september 2021 (80) august 2021 (67) juli 2021 (53) juni 2021 (57) mai 2021 (48) april 2021 (67) mars 2021 (70) februar 2021 (51) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (53) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (109) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)
Kategorier Velg kategori Annonse Covid-19 Doorashada 2017 Norway Doorashada 2021 Fikrado Forsiden Meninger Meninger/Fikrado News in other languages NorSom Magazin Nyheter Nyheter/Warcusub Økonimi/Dhaqaale Politikk/siyaasad sport Utdanning/Waxbarasho Vedio/Muuqaalo Wararka caalamka Xayeysiin